အဖွဲ့ အကြောင်းဆက်သွယ်ရန်ENGLISHLinks	အဖွင့်စာမျက်နှာသတင်းဆည်စီမံကိန်းဧရာဝတီဆည်စီမံကိန်းများဒါးပိန်ဆည်စီမံကိန်းများငေါ့ချမ်းခဆည်စီမံကိန်းသတ္တုတူးဖော်ခြင်းကျောက်စိမ်းတူးဖော်ခြင်းရွှေတူးဖော်ခြင်းရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်းစိုက်ပျိုးရေးကျားထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများအိတ်ဖွင့်ပေးစာများဆန္ဒပြခြင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဗီဒီယိုဓါတ်ပုံ	Home ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
သံလွင်ရေကာတာစီမံကိန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ	မြန်မာမြစ်ချောင်းများကွန်ယက်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၂၉ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂ဝ၁၃
သံလွင်ရေကာတာစီမံကိန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။
သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် ရေကာတာစီမံကိန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပဋိပက္ခကို ပိုမိုဖြစ် စေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကို တိုက်ရိုက်ဖျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် မြန်မာအစိုးရ၊ တရုတ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား ၎င်းစီမံကိန်းများကို ချက်ချင်းရန့်တန့်ရန် မြန်မာမြစ်ချောင်းများကွန်ယက် မှ ယနေ့ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တိုက်တွန်းတောင်း ဆိုလိုက်ပါသည်။
အပြည့်အစုံသို့ . . .
ထမံသီရေကာတာဆောက်လုပ်ရေးရပ်တန့်ခဲ့သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအား ၀မ်းမြောက်စွာကြိုဆိုခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံက ထိုနည်းတူတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုများရှိရန် မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများကွန်ယက်မှ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုခြင်း။
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ	အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 03 ရက်၊ 2013 ခုနှစ်	မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများကွန်ယက်၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
အိန္ဒယနိုင်ငံသို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတင်ပို့ရောင်းချရန်အတွက် ချင်းတွင်းမြစ်အပေါ် ဆောက်လုပ်နေသည့် ထမံသီရေကာတာအား
အန္ဒိယအစိုးရမှ ဆောက်လုပ်ရန် ရပ်တန့်ရုပ်သိမ်းပေးခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများကွန်ယက်မှ ၀မ်းမြောက်စွာ ဂုဏ်ယူပါသည်။
သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အတွက် လိုအပ်နေသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြည့်တင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံ ပင်မမြစ်ချောင်းများအပေါ်
ရေကာတာများ ဆောက်လုပ်ရန်စီစဉ်နေခြင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဖျက်ဆီးမည် ဖြစ်သဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနည်းတူ
ဆောက်လုပ်မှုရပ်တန့်ရုပ်သိမ်းပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများကွန်ယက်မှ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုပါသည်။
အတင်းအဓ္မမပြောင်းရွှေ့ခံကြရသည့် မြစ်ဆုံရွာသားများသည် စီမံကိန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများမလိုအပ်ပဲ ၎င်းတို့၏မြေယာများကိုသာ ပြန်လည်ရရှိရန်သာလိုအပ်ခြင်း။
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ	By: KDNG	သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ 07 ရက်၊ 2013 ခုနှစ်	မကြာသေးမှီက တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) မှ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်များ ” ပိုမိုကောင်းမွန် လာစေရန်အတွက်” ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများရှာကြံရန် အဖွဲ့တဖွဲ့အား ငှားရမ်းပြီး အတင်းအဓမ္မပြောင်းရွှေ့ခံ ရွာသားများအား အမေးအဖြေများလုပ်ခြင်းသည် အဆိုပါ ဧရာသတီမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကာတာဆောက်လုပ်ရေးစံချိန်စံနှုန်းအဆင့်ကို လုံးဝလိုက်နာမှုရှိစေမည် မဟုတ်ချေ။
ဟာဗတ်(ဒ်)၏ ဧရာဝတီ ရေကာတာ ပြန်လည်စတင်မည့်အစီစဉ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မ၀ယ်ယူနိုင်ပါ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ၁၈၊ ၂၀၁၃
မကြာသေးမီက ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ဥာဏ်ကြီးရှင်များသည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကို ပြန်လည်စတင်လုပ်ဆောင်ရန် “ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၏စွမ်းအား”
(Power the peace process) ဟု အမည်ရသော အဆိုပြုစာတမ်းတရပ် ပြုစုရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော်
ထိုစာတမ်းသည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံရေးပြဿနာ အရင်းအမြစ်အား ဖြေရှင်းနိုင်မည်
ထိုစာတမ်းတွင် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် မြစ်ဖျားတလျောက် ရေကာတာ စီမံကိန်း ၇ ခုအား တရုတ် အစိုးရ၊
မြန်မာအစိုးရနှင့်အတူ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရပါ အစုရှယ်ယာရှင်အသစ် အနေဖြင့် ပါဝင်သည့်
သုံးပွင့်ဆိုင်စီးပွားရေးသဘောတူညီမှုတရပ် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် အကြုံပြု ရေးသား ထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) သည် ဇွဲနပဲကြီးစွာဖြင့် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ရှေ့ဆက်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် စိုင်းပြင်းနေသည်ဟု နိုင်ငံတကာရေကာတာအဖွဲ့မှ အတည်ပြုပြောဆိုလိုက်သည်။
By: ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက်အဖွဲ့	သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ 01 ရက်၊ 2012 ခုနှစ်	ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာ အဓိကဆောက်လုပ်သူ(CPI)မှ စီမံကိန်းအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ချက်များပြုလုပ်ပေးရန် နိုင်ငံတကာ ရေကာတာကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့ကို တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကို နိုင်ငံတကာ အကြီးစား ရေကာတာစီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ (ICOLD) မှ မေလ ၃၀ရက်နေ့က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) သည် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေကာတာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုကို ရှာဖွေနေသည်။
မေလ၊ ၂၁၊ ၂၀၁၂
တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) မှ လုပ်ဆောင်နေသော မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းသည် လုံးဝ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသည့်အပြင် အကျိုးရလာဒ်များစွာ ရှိကြောင်းကို သက်သေပြရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ အကြီးစား ရေကာတာစီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့(ICOLD) သည် မြစ်ဆုံရေကာတာအပေါ် “လွတ်လပ်သော” စစ်ဆေးမှုကို ယခုလက်ရှိတွင် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည့်အကြောင်း တရုတ်သတင်းဌာနမှ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထိုလေ့လာမှု၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဆိုင်းငံ့ထားသည့် စီမံကိန်းကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်ချေများသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ	By: ECDF	နေ့စွဲ ။ ဧပြီလ (၁ဝ) ရက်၊ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကူအညီများ အရေးတကြီးတိုးမြင့် ပြင်ဆင်လာကြသည်နှင့်အမျှ ယခုလိုအရေးကြီးသည့်အချိန်၌ မိမိတို့အနေဖြင့် နယ်စွန်နယ်ဖျားတွင် လစ်လျူရှုခံရသူများနှင့် အားအင်ချိနဲ့သူများအတွက် ပံ့ပိုးကူညီနေသည့် နယ်စပ်-ဖြတ်ကျော်ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ကန့်သတ်လျှော့ချလာခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖြတ်တောက်လာခြင်းအပေါ်များစွာ စိုးရိမ်ပူပန်မိကြပါသည်။
မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းပြန်လည်းစတင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စက်ယန္တရားများ နှင့်အင်ဂျင်နီယာ အယောက်၅၀၀ တို့အားဝင်ရောက်လာနိုင်ရန် တရုတ်နယ်စပ်ရုံးမှ ခွင့်တောင်းစာပေးပို့ခြင်း။
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ	By: KDNG	အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ 03 ရက်၊ 2012 ခုနှစ်	ကချင်လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်မှ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြီး ဆိုင်းငံ့ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ သော်လည်း၊ မတ်လ၂၈ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် တရုတ်နယ်စပ်ရုံးမှ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရထံသို့ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြီးပြန်လည် စတင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောစက်ယန္တရားများနှင့်အတူ လမ်းဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ အယောက် ၅၀၀ကို ကချင်ပြနယ်အတွင်းသို့ ၀င်လာနိုင်ရန် တောင်ခံခဲ့ကြသည်။
ယင်းတောင်းခံစာသည် မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် လိုအပ်သော စက်ယန္တရားပစ္စည်းဖြစ်သော ဒီဇယ်တန်(၁၀၀၀)၊ ဓါတ်ဆီ တန်(၂၀၀)၊ ဘိလပ်မြေတန်(၁၀၀၀)၊ မြေတူးစက် (၅)စီး၊ မြေကော်စက်(၆)စီး၊ မြေစာတင်ယာဉ်(၈)စီး၊ လူစီးမော်တော်ကား(၂၀)စီး၊ အခြားလုပ်ငန်းခွင်သုံး စက်ယန္တရားများနှင့်အတူ စားနက်ရိက္ခာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များကို ကန်ပိုက်တီနယ်စပ်ဂိတ်မှ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်ဝင်ရောက်လာနိုင်ရန် ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ထံမှ ခွင့်တောင်းသည့် စာဖြစ်သည်။
ဒီတောင်းခံစာတွင် ထိန်ချုံး- မြစ်ကြီးနာလမ်းဆက်ဆံရေးရုံး တံဆိပ်နှင့် ရုံးတာဝန်ခံ၏ လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
မြစ်ဆုံဆည်အတွက် ရွေ့ပြောင်းခံရသော ရွာသားများ ယခုချိန်ထိ နေရပ်သို့ မပြန်နိုင်ကြသေး
သောကြာနေ့၊ မတ်လ 02 ရက်၊ 2012 ခုနှစ်	ကချင်လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ယမန်နှစ်အတွင်း သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စ ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ချိန်မှ စပြီး စီမံကိန်းအတွက် ရွေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသော ရွာသားများသည် ၄င်းတို့၏ မူလကျေးရွာဟောင်းများသို့ ပြန်လည်နေထိုင်ကြရန် ခွင့်ပြုခြင်း မခံကြရသေးပေ။ ထိုသို့ တားမြစ်ထားသော်လည်း ရွေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသော ရွာသားများသည် ဧရာဝတီဆည်များ အပြီးအပိုင် ရုတ်သိမ်းရေးနှင့် ၄င်းတို့အား ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခြင်းအတွက် ကြောက်ရွံ့မှု မရှိစေပဲ နေရပ်တွင် တရားဝင် ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့် ပြုရေးအတွက် တောင်းဆိုရန် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့တွင် နေရပ်သို့ ပြန်ခဲ့ကြသည်။
မြစ်ဆုံနယ်နိမိတ်တွင် နေထိုင်သူ ရွာသားများသည် မြစ်ဆုံဒေသတွင် ကျင်းပသော အခမ်းအနားအတွက် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ၊ အနုပညာရှင်များနှင့် သတင်းသမားများကို တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ အခမ်းအနား ကျင်းပစဉ်အတွင်း ရိုမန်ကတ်သလစ်နှင့် နှစ်ခြင်း ဘုရားကျောင်းများမှ အသင်းသားများသည် ၄င်းတို့၏ အရေးပါသောနေရာများကို ဆည်ဆောက်လုပ်မည့် စီမံကိန်းဘေးမှာ ကာကွယ်ရန် ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှ ကျောက်ခဲများအား ကောက်ယူစုဆောင်းပြီး ကျောက်နံရံများ တည်ဆောက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားကျောင်းမှ အသင်းသားများသည်
ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ပေးပို့ခဲ့သောစာ
<< Start < Prev 12Next > End >>	Page 1 of 2	နောက်ဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ
စံပြမဖြစ်သည့် စံပြစခန်းများကချင် “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး” မှ ကြုံတွေ့ရသော သင်ခန်းစာများဆည် ရ ခုလုံးရပ်တန့်ခြင်းဖြင့် ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ပါအခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ	Copyright © 2013 ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက်အဖွဲ့ (KDNG). All Rights Reserved.